एनआरएन अभियानलाई अझ धेरै उँचो पार्ने इनर्जी छ : मन केसी, उपाध्यक्षका उम्मेदवार - Rojgar Manch
मङ्लबार, १४ अशोज, २०७६
विगत २३ वर्षदेखि अस्ट्रेलियाको नेपाली समुदायमा अभियन्ताका रूपमा चिनिएका मन केसीले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को आगामी कार्यकालका लागि आइसीसी उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
केसी एनआरएनए अस्ट्रेलियाका संस्थापक अध्यक्ष, सामाजिक अभियन्ता, कुशल व्यवसायीका रूपमा पनि चिनिन्छन् । यसअघि एनआरएनए आइसिसीको प्रवक्ता समेत भैसकेका मन केसी स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाको अनुभवलाई संगालेर आसन्न निर्वाचनमा संस्थाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् ।
मुलुकमा लगानी, सम्मानित वैदेशिक रोजगारी, मुलुकको समृद्धि, एनआरएनए नागरिकता, आधारभूत योजना तर्जुमा गरी सबल संगठनको संरचना जस्ता महत्वपूर्ण कार्ययोजना बोकेर केसीले यसपटक उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । एनआरएन अभियानलाई अझ धेरै उचाईमा पु¥याउनका लागि इनर्जी रहेको उनको भनाई छ । एनआरएन अभियान र भावी योजनाका बारेमा रोजगार मञ्च डटकमले गरेको छोटो कुराकानी :
एनआरएन अभियानमा तपाई हराएर एकाएक उपाध्यक्षको उम्मेद्धवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईलाई किन ल्याउने नेतृत्वमा ?
एनआरएन अभियान चलेको धेरै बर्ष भयो, तपाईहरु एकअर्कामा एकतावद्ध त हुनुभयो तर नेपाल र नेपालीले के पाए, आशा त धेरै छ तपाईहरु माथि ?
म एनआरएन अभियानले ल्याएको परिवर्तनबाट एकदम पोजिटिभ छु । २००५ को दोश्रो विश्व सम्मेलनमा मैले केही व्यक्तित्वहरु भेटेको थिए काठमाण्डुमा । म नेपाल नआएको २८ वर्ष भयो म फलानो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर छु भन्नुहुन्थ्यो वहाँहरुले । त्यस्ता खाले एकदमै हाइटमा पुगेका, संभावना बोकेका व्यक्तिहरुलाई नेपालले गुमाइरहेको स्थिति थियो । ति व्यक्तित्वहरुलाई एउटा सुत्रमा बाँधेर नेपालमा फर्काउने एउटा फर्मल मेकानिज्म हामीसँग थिएन । यही अभियानले त्यसलाई एउटा मालाको रुपमा गाँस्यो, एउटा पोजिटिभ मुभमेन्टको रुपमा बिकास भयो । । हामीले सुरुमै राखेका ३–४ वटा एजेण्डाहरु हाम्रो गोलमा थिए । त्यसमा सम्पुर्ण नेपाली डायस्पोरालाई एउटा सुत्रमा जोड्ने जसबाट एउटा फोर्स क्रिएट गर्ने थियो, जुन आज प्रमाणित भइसकेको छ ।
नेपाल, नेपाली र आफुबिचमा पनि त्यसलाई पोजिटिभ ढंगबाट प्रयोग गर्न सकिने थियो । त्यसबाट ननकर्मसियल फिलानथ्रोपीका कुराहरु जन्मिए, कमर्शियल भेन्चरहरु जन्मिए । नेपालमा थुप्रै लगानीहरु भित्रिए । चर्चामा वा मिडियामा नआएका माइक्रोदेखि मिडियम लगानीहरु त्यही अभियानले जन्म दिएका कुराहरु हुन् । त्यतिकै ठुलो परिमाणमा नेपालमा अर्थको फ्लो पनि भएको छ । अर्को भनेको बौद्धिक, नलेज ट्रान्सफरका कुरा जुन ११४ वटा देशहरुमा हाम्रो नेपाली डायस्पोरा पुगेको छ । एनआरएनले सुरुमा राखेको एजेण्डा थियो त्यो प्राप्त भएको छ । नेपालका लागि नेपाली भन्ने अभियानहरु, भुकम्पका बेला सारा एनआरएन डायस्पोरा नेटवर्क फिल्डमा उत्रिएका कुराहरु भए, बाढी पहिरो लगायतमा जुट्ने र सहयोग गर्ने कुराहरु यही अभियानले ल्याएको बिकास हो । त्यसकारणले म यसमा एकदम सन्तुष्ट छु ।
तर, एनआरएनहरु हल्लामुखी भए, काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ? हुनुहुन्छ ?
हाम्रो एनआरएन मुभमेन्टको पनि हेरक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलन कहाँ गर्ने भनेर थुप्रै बेला डिबेटहरु नभएका होइनन् । तर नेपालमै गर्ने भनेर यो अभियानले हाम्रा पुर्वजहरुको निर्णय स्वागतयोग्य छ । कहिल्यै नेपाल नजाने मान्छे पनि सम्मेलनको लागि २ वर्षमा एकचोटी नेपाल पुग्ने भयो नि त । यसले नेपालको पर्यटन, अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा त पुग्छ । अर्को कुरा एनआरएन साथीहरुले पनि जति गर्न सकिन्छ त्यति बोल्ने र जति बोलिन्छ त्यति गर्ने हो । त्यो चाही हाम्रो संस्थाको लागि मात्र नभएर नेपाल, नेपाली र सारा एसियनहरुमा लागु हुने कुरा हो । त्यो हामीले सुधार्नुपर्ने छ ।
एनआरएनको नेतृत्वमा जानका लागि घोषणापत्र आउँछन्, कार्यान्वयन पक्ष त फितलो छनि ?